Tetiandro litorjika kristiana - Wikipedia
Ny taom-piangonana na tetiandro litorjika kristiana na kalandrie litorjika kristiana na taona litorjika dia tetiandro manondro ny daty raikitra na miovaova ankalazana ny fetim-piangonana na ahatsiarovana ny zava-dehibe niseho teo amin'ny tantaran'ny fivavahana kristiana ary ny daty ahatsiarovana ny olo-masina isan-karazany.
Fitsanganan'i Jesoa ho velona
Avy amin'ny datin'ny Paska na Paka (izay miovaova) sy ny datin'ny Noely na Krisimasy (izay tsy miova) no iaingan'ny fitsipika ahafahana mamantatra ny fotoana litorjika sy ny daty ankalazana ny fety litorjika hafa rehetra. Nivoatra ny tetiandro litorjika nandritra ny taonjato maro nisian'ny fivavahana kristiana ka niteraka fahasamihafana isam-piangonana izany (tetiandro litorjika katolika, ortodoksa, protestanta, sns.).
Ny firavoravoana sasany dia miseho amin'ny daty gregoriana raikitra tsy miova, isan'izany ny Noely, nefa ny sasany miovaova daty, tahaka ireo izay miankina amin'ny andro fankalazana ny Paska. Ireto avy ireo fety lehibe homety amin'ny taom-piangonana: ny Advento (na Fiaviana), ny Noely (na Krismasy), ny Epifania, ny Zoma masina, ny Paska (na Paka), ny Adro niakarana, ny Pentekosta ary ny Trinite.
Misy loko litorjika manavaka azo ampifandraisina amin’ny fizaran-taona samihafa ao amin’ny taona litorjika. Ny datin’ny fety dia miova kely eo amin’ny fiangonana samihafa, na dia mitovy ihany amin’ny ankapobeny ny fifanarakarahana sy ny anton’izany.
1 Tantaran'ny tetiandro litorjika
1.1 Tetiandro tao amin'ny fivavahana jiosy
1.2 Tetiandro litorjika kristiana
2 Ny tsingerina litorjika
2.2 Ny fety manaraka daty raikitra
3 Tetiandro litorjikan'ny kristianisma tatsinanana
3.1 Ny fombam-pivavahana siriaka tatsinanana
3.1.1 Filazàna tamin'i Maria (Subara)
3.1.2 Ny Epifania (Denha)
3.1.3 Fifadian-kanina Lehibe (Sawma Rabba)
3.1.4 Fitsanganan-ko velona (Qyamta)
3.1.5 Apostoly (Slihe)
3.2 Fiangonana ortodoksa atsinanana
3.2.1 Ireo fety lehibe roa ambin’ny folo
3.2.2 Ny tsingerina hafa
4 Tetiandro litorjikan’ny kristianisma tandrefana
4.1 Fanehoana ankapobeny
4.2 Ny mampiavaka ny fiangonana isanisany
4.2.1 Ny fiangonana katolika
4.2.2 Fiangonana anglikana
4.2.3 Fiangonana nohavaozina
4.3 Tetiandro litorjika
4.3.1 Krismasy na Noely
4.3.2 Fotoana tsotra na Andron'ny Fiangonana
4.3.3 Ny Karemy sy ny Pasiona
4.3.4 Ny Pentekosta na Pentekôty
4.3.5 Fotoana tsotra, fotoana aorian’ny Pentekosta, fotoana aorian’ny Trinite na fotoan’ny Fanjakana
Tantaran'ny tetiandro litorjikaHanova
Tetiandro tao amin'ny fivavahana jiosyHanova
Mandositra ny tananan'i Jerosalema ireo Jiosy
Ny manam-pahaizana dia tsy mifanara-kevitra ny amin’ny fahafantarana raha ny tetiandro nampisasin’ny Jiosy talohan’ny Fahababoana babiloniana dia manara-masoandro (miankina amin’ny toeran’ny Masoandro miohatra amin’ny an’ny Tany) na manara-masoandro amam-bolana (miankina amin’ny fifandraisan’ny tsingerim-pihodinan’ny Volana, misy volana fanampiny mba hampifanandrifiana ny tetiandro amin’ny tsingerim-pihodinan’ny Masoandro), sahala amin’ny tetiandro hebreo amin'izao fotoana izao izay nataon’i Hillel II, na manara-bolana fotsiny sahala amin’ny Tetiandro silamo.
Ny volana voalohany amin’ny taona hebreo dia ny volana Aviva na Abiba (hebreo: אביב / Aviv na Abib), izay noraisin’i Mosesy (na Moizy) tamin’ny volana Ipip,volana faha-11 ao amin’ny tetiandro egiptiana tsy manara-bolana (io ihany no niandohan’ny Abib ho volana faha-10 ao amin’ny tetiandro etiopiana tsy manara-bolana) izay midika hoe volan’ny "salohy maitso". Noho izy miseho amin’ny lohataona dia isan’ny tetiandro tropikaly izy. Tokotokony ho amin’ny fotoan’ny Fahababoana babiloniana, rehefa nampiasa ny tetiandro tsotra babiloniana (tsy ara-pivavahana) ny Jiosy dia nandray ho anaram-bolana ny teny hoe Nisana (hebreo: יסן / Nisan) izay avy amin’ny teny babiloniana hoe Nisanu. I Thomas J. Talley dia nilaza fa ny fampiasana ny anaram-bolana babiloniana dia efa niseho talohan’ny Fahababoana.
Tamin’ny tetiandro talohan’io, ny ankamaroan’ny volana dia nantsoina fotsiny amin’ny laharany (ohatra : "volana fahadimy"). Ny anaran’ny volana avy amin’ny fiteny babiloniana ampiasain’ny Jiosy dia ireto:
Nisan (Marsa – Avrily)
Iyar (Avrily – Mey)
Sivan (Mey – Jona)
Av (Jolay – Aogositra)
Elul (Aogositra – Septambra)
Tishri (Septambra – Oktobra)
Kheshvan (Oktobra – Novambra)
Kislev (Novambra – Desambra)
Tevet (Desambra – Janoary)
Shevat (Janoary – Febroary)
Adar (Febroary – Marsa)
Tamin’ny andron’ny tantara ao amin'ny Baiboly dia ireto ny fetim-pivavahana jiosy nankalazaina:
ny Pesah (Paska jiosy) – 14 Nisan (fanaovana sorona zanak’ondry) – 15 Nisan (Sederan’ny Pesah);
ny Shavuot (Pentekosta jiosy) – Andro faha-50 isaina avy eo amin’ny Pesah, izay tokony ho eo amin’ny fahenin'ny volana Sivan;
ny Rosh Hashanah: Andron’ny fitsofana ny shofar ("trompetra") – 01 Tishri;
ny Yom Kippur (Andron’ny fidiovana) – 10 Tishri;
ny Sukkot (Tabernakely) – 15 Tishri;
ny Hanukka (fanolorana na fahazavana) – 25 Kislev (natomboka tamin’ny 164 tal. J.K.);
ny Purim (toko) – 14 Adar (natomboka tamin’ny taona 400 tal. J.K. any ho any).
Tetiandro litorjika kristianaHanova
Ny Paska no fety nankalazain'ny Kristiana voalohany hita ao amin'ny taom-piangonana. Fantatra fa efa nankalazaina izany tamin'ny taonjato faha-2 izay ahatsiarovana ny fiarahan'i Jesosy nisakafo tamin'ireo mpianany sy ny fiaretany fijaliana ary ny fitsanganany hovelona izany. Ireo zava-nitranga efatra ireo dia samy tantarain'ny Evenjely efatra fa niseho tamin'ny fankalazana ny Paska jiosy tao Jerosalema tamin'ny faha-14n'ny volana Nisana amin'ny tetiandro hebreo. Noraiketina tamin'ny taona 325 nandritra ny Konsily tao Nikea ny daty hankalazana azy ka ny Alahady manaraka ny faha-14 andron'ny Volana (fenomanana) mahatratra io fe-potoana io amin'ny 21 Marsa na manarakaraka azy avy hatrany.
Ny tetiandro litorjika dia nivoatra miandalana nanomboka tamin'ny taonjato faha-4 manodidina ny daty ankalazana ny Paska. Ny telo andron'ny Paska (latina: triduum pascale) aloha, ka isan'izany ny roa andro alohan'ny Paska izay nanjary fotoana fifadian-kanina; avy eo ny fankalazana dia niitatra ka nahazo ny herinandro masina nanomboka tamin'ny taona 389. Nanomboka tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-4 dia nialohavan'ny efapolo androm-pifadian-kanin'ny karemy izany . Ny fari-potoan'ny Paska dia niitatra mankany amin'ny Pentekosta, fito herinandro (na dimampolo andro) aorian'ny Paska.
Ny tsingerina litorjikaHanova
Ny tsingerina litorjika dia mizara ny taona ho fifanarakaraham-pizaran-taona maro, ka ny fizaran-taona tsirairay dia mifanentana amin'ny fihetseham-po tokony hananan’ny mpiangona na ny fombam-pivavahana arahina, izay misy fananterana teolojika, ary fomba fivavaka, izay mety hasehon’ny fomba isankarazany ampihaingoana ny fiangonana, ny lokon’ny paramento sy ny fitafian’ny mpitondra fiangonana, ny andalan-tSoratra Masina vakina, ny lohahevitra torina ary ireo fomba fanao izay matetika tandreman’ny isam-batanolona na dia any an-trano aza. Ao amin’ireo fiangonana manaraka taom-piangonana, ny andalan-tSoratra Masina vakina isan’Alahady (na isan’andro amin’ny fiangonana sasany) mandritra ny taona dia voalahatra manokana ao amin’ny boky famakian-teny atao hoe leksionera (frantsay: lectionnaire na épistolier; anglisy: lectionary). Taorian’ny Fanavaozam-piangonana protestanta, ny Anglikana sy ny Loterana dia nanohy nanaraka ny leksionera araka ny fombam-pivavahana romana. Vokatry ny fanapaha-kevitry ny Konsily Vatikàna II, ny Fiangonana katolika dia nanitsy ny leksionerany tamin’ny taona 1969, ka nandray tsingerim-bakiteny telo taona ho an’ny Alahady ary tsingerim-bakiteny roa taona ho an’ny andro hafa ao amin’ny herinandro.
Ny Protestanta dia nandray ny leksionera romana nahitsy sady nampifanaraka azy amin’izay ilany azy, ka navoaka am-boky tamin’ny taona 1994 ny leksikonera nahitsy iraisana ho an’ny Alahady sy ny fety lehibe, izay ampiasain’ny fiangonana protestanta maro amin’izao fotoana izao, isan’izany ny Metodista sy ny Nohavaozina sy ny Fiangonana miray sy mampiray sns.
Ny fety manaraka daty raikitraHanova
Ny fitsingerenan'ny fety ankalazaina amin'ny daty raikitra dia napetraka miandalana nanomboka tamin'ny taonjato faha-4. Efa nisy hatramin'ny taloha ny fetin'ireo maritiora, indrindra tao Roma, fa ny fety mifandray amin'ny fiainan'i Jesoa Kristy teto an-tany kosa (sy ny fetin'i Maria virijiny sy ny an'i Joany Batista) dia nisaraka tamin'ny Paska taty aoriana ka napetraka amin'ireo daty mahazatra amin'izao fotoana izao.
Tamin'ny taona 1582 dia novana nanaraka ny tetiandro gregoriana avy amin'ny tetiandro joliana ny tetiandrom-piangonana tao amin'ireo fanjakana katolika. Noho izany dia misy fahasamihafana ny tetiandro litorjika katolika sy ny tetiandro litorjika ortodoksa, izay nihazona hatrany ny tetiandro joliana.
Tetiandro litorjikan'ny kristianisma tatsinananaHanova
Ny fombam-pivavahana siriaka tatsinananaHanova
Ny tetiandro litorjikan’ny Fiangonana katolika any Atsinanana manaraka ny fombam-pivavahana tatsinanana (dia ny Fiangonana katolika kaldeana sy ny Fiangonana katolika siro-malabara) dia noraiketina araka ny fizotran’ny tantaram-pamonjena. Amin’ny fifantohana amin’ny fiainana ara-tantaran’i Jesoa Krisy, ny mpino dia tarihina ho amin’ny fahatanterahana eskatolojika (izany hoe ny fiadanana any an-danitra) manaraka io fandaminana manokana ny fizaran-taona litorjika io. Ny taom-piangonana dia ahitana fizaran-taona misy fito herinandro eo ho eo isanisany, nefa atao izay hifanarahany amin’ny tetiandro manara-masoandro. Ny fandaminana ny fizaran-taona litorjika dia miankina amin’ny zava-niseho fito lehibe indrindra izay aorina amin’ny fankalazana ny tantaram-pamonjena. Ireto avy izy ireo:
ny Fahaterahan'i Kristy;
ny Epifanian’i Kristy;
ny Fitsanganan’i Kristy ho velona;
ny Hazo fijaliana manam-boninahitra;
ny Parosia (ny fanolorana ny Fiangonana aorian’ny fiavian’i Kristy fanindroany).
Ny famakiana ny Baiboly sy ny vavaka mandritra ny fanaovana sorona masina (lamesa) ary ny "litorjian’ny Ora" dia miovaova araka ny fizaran-taon’ny tetiandro litorjika.
Ny fizaran-taona ao amin'ny tetiandro litorjikan’ny Fiangonana siro-malabara sy ny an'ny Fiangonana katolika kaldeana dia omena etsy ambany:
Filazàna tamin'i Maria (Subara)Hanova
Filazàna tamin'i Maria ny hahaterahan'ny Mpamonjy, nataon'i Gaspare Diziani
Ny herinandron’ny Filazàna mialoha ny fahaterahan'i Jesoa tamin'i Maria (Subara) dia fizaran-taona litorjika iray. Ny taona litorjika dia manomboka amin’ny fanambaràna sy ny fankalazana ny fihaonana ara-tantaran’Andriamanitra amin’ny olombelona tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy, ilay endrik’olombelon’ny personan’Andriamanitra. Ny teny siriaka hoe Subara"fanambaràna mialoha", izay iantsoan’ireo Fiangonana ireo ny herinandro dimy na enina ao amin’ny taona litorjikany, dia fanambaràna mialoha sady filazana amin’ny fomba manetriketrika ankalazana miaraka amin’io vaovao fara tampony sady mitondra fahasambarana io ny fanetren-tenan’Andriamanitra ho amin’ny fahalemen’ny olombelona mba hanandratana azy amin’ny fahambonian’Andriamanitra. Manomboka amin’ny Alahady alohan’ny 01 Desambra sy mifarana amin’ny fetin’ny Epifania, ny fetin’ny batisan’ny Tompo io fizaran-taona. Io fizaran-taona io dia mivoatra ao amin’ny tontolon’ny zava-miafin’ny fahatongavana ho nofo izay tanteraka amin’ny fahafenoan’ny fotoana. Mahatsiaro ny filazàna mialoha ny hahaterahan’i Joany Batista koa ny Fiangonana mandritra ireo andro ireo, dia i Joany izay mpialoha lalana an’i Jesoa, ary koa ny zava-nitranga mahafalin’ny nahateran’i Joany Batista. Ho fanomanana ny fankalazana ny zava-miafin’ny fahatongavana ho nofo, io fizaran-taona io dia mampahatsiahy ny Famoronana, ny tsy fankatoavan’ireo razantsika sy ny vokatr’izany, ny fahantran’ny olobelona tapaka, ny fampanantenana ny famonjena atolotr’Andriamanitra, ny faminaniana ny amin’ny Mpamonjy. Mandritra io fizaran-taona io dia eritreretina koa ny anjara asan’i Maria eo amin’ny tantaran’ny teti-pamonjena. Ny maha zava-dehibe an’i Maria izay mitarika ho amin'ny fitsaohan'ny Fiangonana azy dia miankina amin’ny fifandraisany amin’i Jesoa, ka singanina manokana ny maha renin’i Jesoa azy. Ny fankalazana azy dia anterin’ny fety roa tena manetriketrika: ny Fitorontoronana tsy Voaloto (latina: Immaculata Conceptio) amin’ny 8 Desambra sy ny Fiarahabana an'i Maria renin’i Jesoa amin’ny Zoma farany amin’io fizaran-taona io. Ny Fiangonana dia manatanteraka fifadiana amin’ny 01 hatramin’ny 25 Desambra amin’ny fanomanana ny Noely; io fari-potoana io dia atao hoe "Karemy 25 Andro".
Ireto ireo fety ankalazaina mandritra io fizaram-potoana io:
Fetin’ny Fitorontoronana an'i Maria tsy voaloto, renin’i Jesoa (8 Desambra);
Fetin’ny Hazofijaliana mahagagan’i Milapora (Hazofijaliana kristiana Md. Tomà) (18 Desambra) ao amin’ny Fiangonana Siro-malabara;
Fahaterahan’i Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika na Noely (25 Desambra);
Fetin’ny Zaza masina (28 Desambra);
Fetin’ny Fitondrana an'i Jesoa tao an-tempoly (01 Janoary);
Fetin’i Maria, renin’i Jesoa (Zoma farany ao amin’ny fizaran-taona).
Ny Epifania (Denha)Hanova
Fanaovam-batisa an'i Jesoa, nataon'i Andrea della Robbia.
Ireo herinandron’ny Epifania dia manomboka amin’ny Alahady akaikin’ny fetin’ny Epifania ka mifarana amin’ny fanombohan’ny Fifadian-kanina lehibe. Ny teny siriaka hoe Denha dia midika hoe "fiposahan’ny masoandro". Mandritra io fotoana io dia mieritreritra ny amin’ny fisehoan’ny Trinite Masina sy ny fanambaràna an’i Kristy, fahazavan’izao tontolo izao ny mpino. Ny batemy tao amin’ny ony Jordany dia zava-mitranga voalohany ara-tantara tamin'ny nanambaràna ny Trinite amin’ny olombelona tao amin’ny maha olona an’i Jesoa Kristy. Amin’io fizaran-taona io dia ankalazaina ny fetin'ny Olomasina mifandray amin’ny fisehoan’ny Mpamonjy.
Ny fety ankalazaina mandritra io fari-potoana io dia ireto avy:
Fetin’ny Epifania na fetin’ny Batemin’ny Tompo (6 Janoary);
Fetin’ny Md. Joany Batista amin’ny Zoma voalohan’ny Epifania;
Fetin’ny apostoly Petera (na i Kefa) sy Paoly amin’ny Zoma faharoan’ny Epifania;
Fetin’ireo Evanjelista amin’ny Zoma fahatelo amin’ny Epifania;
Fetin’ny Md. Stefana amin’ny Zoma fahefatry ny Epifania;
Fetin’ireo Rain’ny Fiangonana amin’ny Zoma fahadimin’ny Epifania;
Fetin’ny Md. Olomasina mpiahy ny Fiangonana amin’ny Zoma fahenin’ny Epifania;
Fetin’ny mpino maty rehetra ny Zoma faran’ny Epifania.
Fifadian-kanina Lehibe (Sawma Rabba)Hanova
Fisamborana an'i Jesoa, nataon'i Hans Holbein, 1523
Mandritra ireo herinandro ireo ny Fifadian-kanina Lehibe, ny mpino dia misaintsaina sy mieritreritra ny fiainan’i Jesoa ampahibemaso ary indrindra ny fijaliany (Pasiona) sy ny fahafatesany ary ny fandevenana azy izay fara tampony amin'izany. Izany fizaram-potoana izany dia manomboka 50 andro alohan’ny Paska amin'ny "Alahadin’ny Peturta" ka ao anatiny ny fari-potoan’ny Karemy Lehibe sady mifarana amin’ny Alahadin’ny Fitsanganan-ko velona. Ny teny siriaka hoe Peturta dia midika hoe "fijerena ny any aoriana" na "fampihavanana". Fotoana omen’Andriamanitra hibanjinana lalina ny fianinan’ny tsirairay sy haharesy lahatra ny amin’ny halehiben’ny fitahiana azo amin’ilay Andriamanitra be fitiavana, dia ny Famoronana, ny hatsaram-pom-pamonjena, ny fahalavoan’ny olombelona, ny tsy fahafahan’ny olombelona hamonjy tena, ny fampanantenana ny famonjena, ny fanavotana tamin’ny alalan’i Jesoa zanak'Andriamanitra ary ny fiaretan’i Kristy fijaliana. Ny mpino dia miditra amin’ny herinandron’ny Fifadian-kanina Lehibe, ka mankalaza ny fahatsiarovana ny mpino maty rehetra amin’ny Zoma farany amin’ny Denha. Araka ny fomba fijery eklezialy sy litorjikan’io fanao io, ireo herinandron’ny Fifadian-kanina Lehibe ireo dia fotoana ahatsiarovana am-bavaka manokana ireo olo-malala maty, ny fahafoizan-tena, ny fiantrana ny mahantra, sns, ary anomanan-tena amin’ny fahafatesana sy amin’ny fitsanganan-ko velona tsy arahim-pijaliana ao amin’i Jesoa Kristy. Mandritra ny fifadian-kanina dia tsy mihinan-kena na atody na trondro na zavatra vita amin’ny ronono ary ny ankamaroan’ireo sakafo tiana indrindra ny mpiono ao amin’ny Fiangonana siro-malabara, sady tsy manao firaisana ara-nofo mandritra ireo andro rehetra ireo, isan’izany ireo Alahady sy ny andro fety. Talohan’ny fanjanahantany eoropeana dia tsy nihinan-kanina afa-tsy indray mandeha isan’andro (aorian’ny amin’ny telo tolakandro) ny Indiana Nasrany mandritra ny Fifadian-kanina Lehibe.
Fananganana an'i Lazarosy amin'ny maty, nataon'i Léon Joseph Florentin Bonnat, 1857.
Ireto avy ireo fetin’ny Keremy:
ny Alahadin’ny Peturta: Alahady voalohany amin'ny Fifadian-kanina Lehibe;
ny Alatsinainin'ny Lavenona na Alatsinainy madio: andro voalohany amin’ny Fifadian-kanina Lehibe;
ny Zoman’i Lazarosy: andro fahenin’ny Fifadian-kanina Lehibe;
ny Alahadin’ny Oshana ("Hosana" Alahadin'ny sampan-kazo): andro fahafiton’ny Fifadian-kanina Lehibe;
ny Alakamisin’ny Pesha (Paska);
ny Zoman’ny trondro na Zoma masina;
ny Asabotsy Lehibe na Asabotsin’ny Fahazavana.
Aorian’ireo fety ireo dia manaraka ao amin’ny Karemy:
ny Fetin’i Mar Kirily avy any Jerosalema (15 Marsa);
ny Fetin’i Md. Josefa (19 Marsa);
ny Fetin’ny Filazàna mialoha tamin'i Maria (25 Marsa).
Fitsanganan-ko velona (Qyamta)Hanova
I Jesoa nitsangan-ko velona, nataon'i Ricardo André Frantz
Ireo herinandron’ny Fitsanganan-ko velona lehibe dia manomboka amin’ny Alahadin’ny Fitsanganan-ko velona ka mizotra mankany amin’ny fetin’ny Pentekosta. Mankalaza ny Fitsanganan-ko velon’ny Tompo ny mpino mandritra ireo herinandro fito ireo: ny fandresen'i Jesoa ny fahafatesana, ny fandreseny ny fahotana, ny fandreseny ny fijaliana ary ny fandreseny an’i Satana. Io no fizaran-taona ho an’ny fifaliana lehibe noho ny fiainam-baovao azo vokatry ny fitsanganan’ny Mpamonjy ho velona. Mahatsiaro ny zava-nitranga niseho taorian’ny fitsanganan’i Kristy ho velona koa ny Fiangonana, ka isan’izany ny fisehoan'i Jesoa tamin'ireo mpianany sy ny fiakarany any an-danitra. Ho an'ny fivavahana kristiana tatsinanana dia fety lehibe indrindra ny fetin’ny Fitsanganan-ko velona ao amin’ny taona litorjika. Ny herinandro voalohany ao amin’ny fizaran-taona dia ankalazaina amin’ny maha "herinandron’ny herinandro" azy satria herinandron’ny fitsanganan’i Kristy ho velona izany.
Ireto ireo fety ankalazaina mandritra io fari-potoana io:
ny Fetin’ny Fitsanganan’i Kristy ho velona;
ny Fetin’ny Olomasina rehetra amin’ny Zoma voalohan’ny Qyamata;
ny Alahady vaovao na Alahadin’i Md. Tomà amin’ny Alahady faharoan’ny Qyamata;
ny Fetin’ny Fiakaran’i Jesoa any an-danitra ny Zoma fahenin’ny Qyamata.
Aorian’ireo fety ireo dia manaraka mandrakariva ao amin’ny fizaran-taon’ny Fitsanganan-ko velona ireto fety ireto:
ny Fetin’i Md. Georgio (24 Avrily);
ny Fetin’ny Evanjelista Marka (25 Avrily);
ny Fetin’i Md. Josefa, ilay mpandrafitra (01 Mey);
ny Fetin’i Md. Filipo sy Md. Jakoba izay samy apostoly (03 Mey).
Ireo Apostoly roa ambin'ny folo.
Ny herinandron’ny Apostoly dia manomboka amin’ny andron’ny Pentekosta, 50 andro aorian’ny Alahadin’ny Fitsanganan-ko velona. Mandritra ireo andro ireo, ny mpino dia mahatsiaro ny fanokanana ny Fiangonana sy ny asan’ireo Apostoly ary ny Rain’ny fiangonana, izay nanorenana ny Fiangonana. Saintsainina ireo zava-dehibe teo amin'ny fiainan'ny Fiangonana voalohany, toy ny fifandraisan'ny mpirahalahy, ny famakiana ny mofo, ny fizaràna ny harena, ireo vokatry ny Fanahy Masina ary ny fanomezam-pahasoavany. Ny fielezan'ny fiangonana eran’izao tontolo izao sy ny fitomboany dia tsarovana koa mandritra io fizaran-taona io.
Ireto ireo fety ankalazaina mandritra io fizaran-taona io:
ny Fetin’ny Pentekosta amin’ny Alahady volohan’ny Slihe;
ny Fetin’ny Zoma volamena: fahatsiarovana ny fahagagana voalohany nataon’ireo Apostoly dia ilay nataon’i Md. Petera.
Ireto koa ny fety hafa azo ankalazaina mandritra ny fizaran-taon’ny Slihe:
ny Fetin'i Mar Afrema;
ny Fetin’i Md. Petera sy Md. Paoly;
ny Fetin’i Md. Tomà – ray mpanorina ny fiangonana siriaka tatsinanana.
Fiangonana ortodoksa atsinananaHanova
Ny taona litorjika ao amin’ny Fiangonana ortodoksa tatsinanana dia miavaka noho ny fisian’ny fifandimbiasan’ny fifadian-kanina sy ny fety, ary mitovitovy amin’ny lafiny sasany amin’ny an’ny Katolika romana izany. Ny taom-baovaon’ny Fiangonana anefa, raha araka ny fanao taloha, dia manomboka amin’ny 01 Septambra, fa tsy amin’ny Alahady voalohan’ny Advento. Ahitana fety roa manaraka tsingerijna raikitra sy tsingerina paskaly (na miova) amin'izany. Ny fety lehibe indrindra dia ny fetin’ny Paska (Paskha). Manaraka ny fety lehibe roa ambin’ny folo, izay ahatsiarovana ny zava-nitranga miavaka indrindra teo amin’ny fiainan’i Jesoa Kristy sy ny Renin'Andriamanitra (Theotokos: Masina Maria).
Ny ankamaroan’ny Kristiana ortodoksa (ny Rosiana indrindra) dia manaraka ny tetiandro joliana mba hikajiany ny datin’ny fetim-piangonana, nefa maro (isan’izany ny Patriarkata Ekiomenika sy ny Fiangonan’i Gresy) no nandray ny fomba fikajiana araka ny tetiandro joliana nahitsy (izay mifanandrify ankehitriny amin’ny tetiandro gregoriana) mba hikajiany ireo fety miovaova daty arakaraka ny datin’io tetiandro io.
Eo anelanelan’ny taona 1900 sy 2100 dia misy elanelany 30 andro amin’ny datin’ny tetiandro joliana sy ny tetiandro joliana nahitsy na ny tetiandro gregoriana. Raha ohatra ka ankalazaina amin’ny 25 Desambra ny Noely araka ny fanao tranainy dia mifanandrify amin’ny 7 Janoary amin’ny tetiandro joliana nasiam-panitsiana izany. Ny fikajiana ny datin’ny Paska anefa dia araka ny tetiandro manara-bolana miorina amin’ny tetiandro joliana, na dia ao amin’ireo fiangonana manaraka ny tetiandro joliana nasiam-panitsiana aza.
Misy fizaran-taona efatra ifadian-kanina ny taona iray:
Ny fifadian-kanina lehibe indrindra dia ny Karemy Lehibe, izay fotoana mahery vaikan’ny fifadian-kanina sy ny fiantrana ary ny vavaka, izay maharitra 40 andro alohan’ny Alahadin'ny Sampan-kazo sy ny Herinandro masina, eo amin’ny fanomanana ny Paska.
Ny fifadian-kaninan’ny fahaterahan’ny Mpamonjy (Karemy ririnina) dia fotoana fanomanana ny fetin’ny Fahaterahan’i Kristy (Noely), nefa raha maharitra 40 herinandro ny Advento any Andrefana, ny Fahaterahana kosa maharitra fifadian-kanina 40 andro.
Ny fifadian-kanina ho an’ny Apostoly dia miovaova faharetana, eo anelanelan’ny valo andro sy roa herinandro, manomboka amin’ny 01 hatramin’ny 14 Aogositra, amin’ny fotoam-panomanana ny fetin’i Md. Petera sy Md. Paoly (29 Jona).
Ny fifadian-kanin’ny Torimason’i Maria (latina: dormitio) maharitra roa herinandro, hatramin’ny 01 ka hatramin’ny 14 Aogositra, ao anatin’ny fanomanana ny fetin’ny Torimason’ny Teoktokos (15 Aogositra).
Ny taom-piangonana dia voarafitra mba hahatonga ireo fety lehibe hankalazaina mandritra ny fizaran-taom-pifadian-kanina tsirairay, ka hahatonga ny fifadian-kanina hifandimby amin’ny andro fifaliana.
Ankoatr’ireo fizaran-taona ifadian-kanina ireo dia ifadian-kanina koa amin’ny Alarobia sy Zoma amin’ny taona manontolo (ary ny monastera ortodoksa sasany dia mitandrina koa ny Alatsinainy ho fifadian-kanina). Ny andro raikitra sasany dia mandrakariva andro fifadian-kanina, na dia mifanandrify amin’ny Asabotsy na Alahady (izany fifadian-kanina izany dia azo hakelezina, nefa tsy foanana tanteraka); ireto izy ireo:
Ny Fanapahan-doha (Decollatio) an’i Md. Joany Batista;
Ny Voninahitry ny Hazo fijaliana;
Ny Fiaretan-torin’ny Epifania (5 Janoary).
I Salome mitondra ny lohan'i Joany, nataon'i Caravaggio, 1610
Maro ireo fotoana tsy ifadian-kanina, rehefa tsy azo atao ny mifady hanina, na amin’ny Alarobia sy ny Zoma aza. Ireto avy izy ireo: ny herinandro aorian’ny Paska, ny herinandro aorian’ny Pentekosta, ny fotoana manomboka eo anelanelan’ny Fahaterahan’i Kristy sy ny 5 Janoary ary ny herinandro voalohan’ny Triodion (herinandro manaraka ny Alahady faha-17 alohan’ny Pentekosta).
Ny fety lehibe indrindra dia ny Pascha (Paska). Ny Paska ho an’ny fiangonana any Atsinanana sy aty Andrefana dia kendrena ho ny Alahady voalohany aorian’ny fenomanana mifanandrify amin’ny 21 Marsa na aorian’io daty io (izany hoe ny andron’ny fitoviam-paharetan’ny andro sy ny alina, ekinoksa vernaly), nefa ny kajin’ny Ortodoksa dia aoriny amin’ny tetiandro joliana ka ny 21 Marsa dia mifanadrify amin'ny 3 Avrily amin'ny tetiandro gregoriana, sy amin’ny kajin’ny datin’ny fenomanana hafa noho ny fanao amin’ny any Andrefana.
Fidiran'i Jesoa ao Jerosalema, nataon'i Pietro Lorenzetti, 1320
Ny datin’ny Paskha dia ivon’ny taom-piangonana manontolo, ka mamaritra, tsy ny datin’ny fiandohan’ny Karemy Lehibe sy ny Pentekosta ihany, fa ny fikajiana ny tsingerin’ireo fety miovaova daty sy ny famakiana ny Soratra Masina ary ny Oktoekhos (lahatsoratra vakina manaraka fomba valo samihafa ao am-piangonana) mandritra ny taona. Misy koa ny fety vitsivitsy tsy tena manan-danja firy mandritra ny taona izay miorina amin’ny datin’ny Paskha. Ny tsingerina miova daty dia manomboka amin’ny Alahadin’i Zakaiosy (ny Alahady voalohany anomanana ny Karemy Lehibe na ny Alahady faha-33 manaraka ny Pentekosta), na dia mitohy hatramin’ny Alahadin’ny Sampan-kazo (na Alahadin'ny Sampan-drofia) aza ny tsingerin’ny Oktekhos.
Ny datin’ny Paskha dia mahakasina ireto fizaran-taona litorjika manaraka ireto:
ny fari-potoan’ny Triodion (ireo Alahady alohan’ny Karemy Lehibe, ny Herinandron’ny fromazy (na Maslenitsa), ny Alahadin’ny Sampan-kazo ary ny Herinandro masina);
ny fari-potoan’ny Pentekosta (Alahadin’ny Paskha hatramin’ny Alahady aorian’ny Pentekosta, atao hoe koa Alahadin’ny Olomasina).
Ireo fety lehibe roa ambin’ny foloHanova
Ny sasany amin’ireo fety roa ambin'ny folo ireo dia manaraka tsingerina raikitra fa ny sasany manaraka tsingerina miova daty (tsingerina paskaly). Ny ankamaroan’ireo manaraka tsingerina raikitra dia manana fari-potoana fanomanana atao hoe fety mialoha, avy eo ny fari-potoana fankalazana mitovitovy amin’ny Valo andro (latina: Octava) any Andrefana, atao hoe fety famaranana. Ny fety lehibe ao amin’ny tsingerina paskaly dia tsy misy fety mialoha. Ny faharetan’ny fety mialoha sy ny fety famaranana dia miovaova arakaraka ilay fety antom-pisiany. Ireto avy ireo fety lehibe ireo:
ny Fahaterahan’ny Theotokos (8 Septambra): fahaterahan’ny Theotokos (i Maria) ho an’i Joakima sy Ana;
ny Fanandratana ny Hazo fijaliana (14 Septambra): ny fahitana ilay hazofijaliana marina namantsihana an’i Kristy;
ny Fidiran’ny Theotokos ao an-tempoly (21 Novambra): fidiran’ny Theotokos ao amin’ny tempoly tokony tamin’ny fahatelo taonany;
ny Fahaterahan’i Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika (25 Marsa): ny fankalazana ny fahaterahan’i Jesoa izay atao hoe Noely;
ny Teofania (6 Janoary): ny batemin’i Jesoa Kristy, ny tsodrano amin’ny rano nataon’i Kristy sy ny fisehoana voalohan'ny maha Andriamanitra an'i Kristy;
ny Fanehoana ny Tompo tao an-tempoly: fanehoana an’i Kristy zaza tao amin’ny tempoly nentin’ny Theotokos sy i Josefa;
ny Filazana mialoha ny hahaterahan’i Jesoa tamin’ny Theotokos (25 Marsa): nanambara tamin’ny Theotokos ny hitorontoronana an’i Kristy ny anjely Gabriela ary nanaiky an-tsitrapo ny Theotokos.
Amin’ny fanao tatsinanana dia amin’ny Herinandro masina na amin’ny Paskha koa aza no ankalazana io fety io, ny fetin’ny Filazana mialoha ny hahabevohoka an’i Maria sy ny Paskha (fantatra amin’ny anarana hoe διπλή Πασχαλιά / dipli Paskhalia amin’ny teny grika ankehitriny) dia heverina ho zava-mitranga anaovana fety lehibe.
ny Fidirana ao Jerosalema (Alahady alohan’ny Paskha): fantatry ny fiangonana aty Andrefana amin’ny anarana hoe Alahadin’ny Sampan-kazo;
ny Andro Niakarana (40 andro aorian’ny Paskha): fiakaran’i Kristy any an-danitra taorian’ny fitsanganany ho velona;
ny Pentekosta (50 andro aorian’ny Paskha): ny Fanahy Masina avy sady nonina tamin’ny Apostoly sy tamin’ireo mpino kristiana hafa koa;
ny Fiovan-tarehin’ny Tompontsika (6 Aogositra): fiovan-tarehin’i Kristy araka izay ijoron’i Petera sy i Jakoba ary i Joany vavolombelona;
Fiovan-tarehy, nataon'i Raphael, taona 1518-1520
ny Torimason’ny Theotokos (15 Aogositra): fampatoriana ny Theotokos (jereo: Andro nampakarana an’i Maria ho any an-danitra ho an’ny Kristianisma tandrefana);
ny Fiarovana ny Renin’Andriamanitra (1 Oktobra) – indrindra ao amin’ny Ortodoksa rosiana;
ny Fetin’i Md. Jakoba ilay Marina (23 Oktobra);
ny Fetin’i Md. Demetrio avy any Tesalonika (26 Oktobra);
ny Fetin’i Md. Arkanjely Misely sy Gabriely (8 Novambra);
ny Fetin’i Md. Nikolà, evekan’i Mira any Lisia / Likia (6 Desambra);
ny Fetin'ny fitorontoronan'i Mb. Ana an'i Maria tamin’i Md. Joakima (9 Desambra);
ny Fetin’i Md. Spiridona (12 Desambra);
ny Fetin’i Md Stefana diakra (27 Desambra);
ny Fetin’i Md Basily Lehibe sy ny famorana an’i Kristy (1 Janoary);
ny Fetin’ireo Md Hierarka: i Bazily Lehibe, i Gregorio Teolojiana ary i Joany Krizostoma (30 Janoary);
ny fetin’ireo martiry 40 tao Sebasta (9 Marsa);
ny Fetin’i Md Patrika (17 Marsa)
ny Fetin’i Md Georgio (23 Avrily);
ny Fetin’i Md Emperora Konstantino sy Mb Helena (21 Mey);
ny Fahaterahan’i Md. Joany Batista (24 Jona);
ny Fetin’i Md Petera sy Md Paoly;
ny Fetin’i Md Elia mpaminany (20 Jolay);
ny Fetin’i Mb Kristina avy any Bolsena, ilay maritiry lehibe (27 Jolay);
ny Nanampahan-doha an’i Joany Batista (29 Aogositra);
ny Fanombohan’ny Indiksiona, Taom-piangonana (1 Septambra);
ny Fetin’ireo Masindahy Mpiahy ny Fiangonana na ny monastera.
Ny andro tsirairay ao amin’ny taona dia ahatsiarovana olomasina na zava-nitranga momba ny fiainan’i Kristy na ny Renin’Andriamanitra. Rehefa tonga ny fety manaraka tsingerina miova dia afindra daty io fety io.
Ny tsingerina hafaHanova
Ankoatry ny tsingerina raikitra sy ny tsingerina miova daty dia misy koa tsingerina litorjika sasany ao amin’ny taona izay misy fiantraikany amin’ny fankalazana ny fanompoana masina. Isan’ireo ny tsingerina isan’andro, ny tsingerina isan-kerinandro, ny tsingerin’ny Evanjelin’ny maraina (matines) ary ny Oktoekhos.
Tetiandro litorjikan’ny kristianisma tandrefanaHanova
Ny tetiandro litorjika kristiana tandrefana dia miorina amin’ny tsingerin’ny fombam-pivavahana romana ampiasain’ny Fiangonana katolika, ka isan’izany ny taom-piangonana loterana, anglikana, protestanta hafa, satria io tsingerina io dia nialoha ny Fanavaozam-piangonana.
Fitsaohan'ny Magy, nataon'i Bartolomé Esteban Murillo, taonjato faha-17
Amin’ny ankapobeny, ny fizaran-taona litorjika ao amin’ny kristianisma tandrefana dia ny Advento, ny Noely, ny fotoana tsotra (ireo fotoana aorian’ny Epifania), ny Karemy, ny fotoan’ny Paska ary ny fotoana tsotra (fotoana aorian’ny Pentekosta). Tsy mampiditra fotoana tsotra ny fiangonana protestanta sasany: ny andro tsirairay dia manandrify fizaran-taona iray.
Ny Profesora Hoyt L. Hickman, ao amin’ny Oniversite Vanderbilt, dia miteny toy izao momba ny tetiandro kristiana tandrefana ao amin'ny Fiangonana mampiasa ny Revised Common Lectionary ("Leksionera iraisana nasiam-panitsiana"), isan’izany ny Fiangonana presbiteriana, ny metodista, ny anglikana, ny loterana, ny episkopaliana ary ny batista, raha tsy hitanisa afa-tsy ireo:
"Ireo tetiandro rehetra ireo dia mifanaraka ka samy milaza fa ny Andron’ny Tompo dia nanan-danja indrindra ao amin’ireo zavatra tandremana ao amin’ny taona ary ny taona kristiana dia ahitana tsingerina roa lehibe: ny tsingerin’ny Paska sy ny tsingerin’ny Noely. Ny tsingerina tsirairay dia misy fizaran-taona anaovam-pankalazana (Paska sy Noely), ialohavan’ny fizaran-taona fanomanana sy fialohavana (Karemy sy Advento). Ao amin’ny ankamaroan’ny fiangonana samy hafa sy ao amin’ny leksionera iraisana, ny Karemy sy ny Advento dia ialohavan’ny Alahady tetezamita (Fiovan-tarehy sy Kristy Mpanjaka), ary ny fizaran-taon’ny Paska sy ny an’ny Noely dia arakarahin’ny Alahady tetezamita (Trinite sy Batisan’ny Tompo)".
Amin’ny ankapobeny ireo fiangonana protestanta, afa-tsy ny loterana sy ny anglikana, dia mitandrina fety vitsy kokoa ny amin’ny olomasina raha mitaha amin’ireo fiangonana voatanisa eo aloha ireo, ankoatry ny fiangonana katolika sy ny ortodoksa.
Ny mampiavaka ny fiangonana isanisanyHanova
Ny fiangonana katolikaHanova
Ny Fiangonana katolika dia manokana ny andro sy ny fizaran-taona sasany mba hahatsiarovana sy hankalazana ny zava-nitranga teo amin’ny fiainan’i Kristy. Ao amin’ny fombam-pivavahana romana arahiny, ny taona litorjika dia manomboka amin’ny Advento, izay fotoana fanomanana ny fankalazana ny nahaterahan’i Jesoa sy ny fahatongavany fanindroany izay andrasana amin’ny andro farany. Io fizaran-taona io dia maharitra hatramin’ny andro iray alohan’ny Noely (sasakalin’ny Noely), amin’ny 24 Desambra. Manaraka ny fetin’ny Noely izay manomboka amin’ireo takariva voalohan’ny Noely amin’ny harivan’ny 24 Desambra sy mifarana amin’ny fetin’ny Batemin’ny Tompo. Araka ny fanao tranainy dia mifarana amin’ny 2 Febroary ny ny Noely, na fetin’ny Fanehoana ny Tompo (tao amin’ny Tempoly), izay atao hoe koa Fetin’ny jiro (na Fetin’ny fanazavana). Io fety io dia itantarana ny 40 andro nialan’i Maria sasatra talohan’ny hidiovany sy hitondrany ny zanany ao amin’ny Tempolin’i Jerosalema.
Ny Karemy dia fotoam-pidiovana sy fieken-keloka izay manomboka amin’ny Alarobian’ny Lavenona ary mifarana amin’ny Alakamisy masina. Ny sorona masina (lamesa) atao ho an’ny Eokaristia, amin’ny Alakamisy masina, dia anombohan’ny Telo andron’ny Paka (latina: Triduum paschale), izay misy ny Zoma masina sy ny Asabotsy masina ary ny Alahadin’ny Paka. Ny Telo andron’ny Paka dia ahatsiarovana ny sakafo farany niarahan’i Jesoa nihinana tamin’ireo mpianany, ny fahafatesany teo amin’ny lakroa, ny fitsanganany ho velona. Ny fizaran-taona litorjikan’ny Paka, izay maharitra fito herinandro, dia manarakaraka ny Telo andron’ny Paka ary mahatratra ny fara tampony amin’ny Pentekoty. Io fety farany io dia ahatsiarovana ny nidinan’ny Fanahy Masina teo amin’ireo mpianatr’i Jesoa taorian’ny Fiakaran'i Jesoa ho any an-danitra. Ny andro sisa rehetra amin’ny taona litorjika dia atao hoe Adro tsotra na Fotoana tsotra..
Misy endrika litorjika maro ao amin’ny Fiangonana katolika. Ankoatry ny fombam-pivavahana tatsinanana maro mpanaraka dia ahitana an’ireto ny fombam-pivavahana litorjika latina: ny fombam-pivavahana ambroaziana sy ny fombam-pivavahana mozarabo ary ny fombam-pivavahana sistersiana, ary koa endrika hafa maro izay efa tsy arahina intsony ka nosoloana amin'ny fombam-pivavahana romana.
Avy amin’io fombam-pivavahana io, izay atao ankehitriny hoe "tsotra" na "mahazatra", na ny endrika "manara-penitra", raha hampiasa ny fombam-pitenenan’ny Papa Benoa XVI (ao amin’ny Taratasy nampiarahiny tamin’ny Motu proprio Summorum Pontificum, dia ilay novolavolaina hatramin’ny Konsily Vatikàna II hatramin’izao fotoana izao), nefa ilay manan-kery tamin’ny taona 1962 dia nahazo alalana ho endrika manokan’ny fombam-pivavahana romana tsy asiana famerana rehefa atao ny fankalazana mangingina sy araka ny fepetra voalaza ao amin’ny andininy faha-5 ao amin’ny Moto proprio Summorum Pontificum amin’ny fankalazana ampahibemaso.
Ny tetiandro litorjika amin’io endriky ny fombam-pivavahana romana io (taona 1960) dia misy fahasamihafana amin’ny endrika mahazatra amin’izao fotoana izao, sy amin’ny tetiandro romana ankapobeny nataon’ny papa Pio XII, ary lehibe kokoa izany fahasamihafana izany raha mitaha amin’ny tetiandro romana ankapobeny tamin’ny taona 1954 sy amin’ny Tetiandro tridentina voalohany. Ireo andininy ireo dia azo vakina ny amin’ny taona litorjika romana talohan’ny taona 1960.
Ny Fiangonan’i Angletera izay Fiangonana Renin’ny Fiombonambe anglikana dia mampiasa taona litorjika misy itovizany betsaka amin’ny an’ny Fiangonana romana. Na dia tsy tena marina aza izany ho an’ny tetiandro hita ao amin’ny Book of Common Prayer sy ny Alternative Service Book (1980), dia marina indrindra izany hatramin’ny nandraisan’ny Fiangonana anglikana ny endrika vaovaon’ny fanompoana sy ny litorjia voarakitra ao amin’ny Fanompoam-pivavahana iraisana (Common Worship) tamin’ny taona 2000. Marina fa ny fizaràna lehibe ao amin’ny taona, dia ny fizaran-taon’ny Noely sy ny an’ny Paka, izay hasinkasinin’ireo fotoana tsotra, dia mitovy, ary ny ankabeazan’ny fety sy ny fahatsiarovana dia ankalazaina koa, afa-tsy ny sasantsasany.
Amin’ny fiangonana anglikana sasany (isan’izany ny Fiangonan’i Angletera), dia ny fari-potoan’ny Noely no arakarahin’ny fizaran-taon’ny Epifania izay manomboka iray andro alohan’ny Epifania (16 Jona na Alahady akaiky azy indrindra) ary mifarana amin’ny fetin’ny Fanehoana an'i Jesoa tany an-tempoly (2 Febroary na ny Alahady akaiky azy indrindra). Ny fotoana tsotra dia manomboka aorian’izany fotoana izany.
Ny Book of Common Prayer dia mirakitra ny leksionera eokaristika tandrefana fampiasa tranainy, izay niforona avy ao amin’ny "Avia" nataon’i Md Hieronimo (na Jerôma) tamin’ny taonjato faha-5. Ny fifanahafany amin’ny leksionera tranainy dia miseho mazava mandritra ny fizaran-taon’ny Trinite (ireo Alahady aorian’ny Alahady voalohany manaraka ny Pentekosta), izay ahitana taratra izany fahazoana ny hevitry ny fanamasinana izany.
Ny Kristiana nohavaozina (frantsay: Reformés) dia manantitra ny fankalazana isan-kerinandro ny Andron’ny Tompo, ka raha ny sasany koa mankalaza izay ataony hoe Fety ara-pilazantsara: ny Krismasy, ny Zoma masina, ny Paska, ny Andro niakarana ary ny Pentakosta), ny hafa tsy mankalaza andro masina na iray aza.
Ny Advento na Fiaviana
Ny Advento (latina: Adventus "fiaviana" na "fahatongavana") dia fizaran-taona voalohany ao amin’ny taona litorjika. Manomboka amin’ny Alahady fahefatra alohan’ny Noely na Krismasy izy, dia ny Alahady tandrify ny 30 Novambra na manakaiky azy, ary mifarana iray andro alohan’ny Noely. Araka ny fanao tranainy dia tandremana amin’ny fifadian-kanina izy, ary mampifantoka amin’ny fiomanana amin’ny fiavian’i Kristy, tsy ny fiaviany tamin’ny fahazazany izay ankalazaina amin'ny Noely ihany, fa koa ny fiaviany amin’ny andro farany (eskatolojika), izay mahatonga ny Advento ho "fotoan’ny fiandrasana am-pinoana sy an-kafaliana".
Io fizaran-taona io dia matetika marihin'ny Satroboninahitry ny Advento, girlandy vita amin’ny hazo konifera misy labozia efatra. Na dia manamarika ny firosoan’ny fotoana ihany ny hevitra ara-tandindon’ny satroboninahitra, dia maro ny fiangonana izay mampifamatotra lohahevitra amin’ny labozia tsirairay, ny matetika dia ny fanantenana sy ny finoana sy ny fifaliana ary ny fitiavana izany. Ny fampiasana ny "tetiandron’ny Advento" na ny an’ny "Hazon’i Jese" mba hanisana ny andro hatramin’ny Noely dia fomba fanehoan'ny sarambaben'ny mpino ny fanoloran-tenany amin’ny Advento.
Izao ny loko litorjika ampiasaina: volomparasy na manga amin’ny fiangonana sasany, toy ny Metodista sy ny Episkopaly na ny Loterana  .
Krismasy na NoelyHanova
Ny fizaran-taon’ny Noely na Krismasy dia manaraka ny Advento. Ireo andro roa ambin’ny folon’ny Noely tany aloha dia manomboka amin’ny harivan’ny 24 Desambra miaraka amin’ny Sasakalin’ny Noely (fiaretan-torin’ny Noely) ary mitohy hatramin’ny fetin’ny Epifania. Ny fari-potoan’ny Noely dia mitohy hatramin’ny fetin’ny batisan’i Kristy, izay ankalazaina amin’ny endrika ahalalana azy amin’izao fotoana izao amin'ny fombam-pivavahana romana amin’ny Alahady aorian’ny 6 Janoary na ny Alatsinainy manaraka raha an’ny Epifania io Alahady io.
Talohan’ny taona 1970 dia nankalazaina amin’ny 13 Janoary io fety io, afa-tsy hoe io 13 Janoary io Alahadin’ny Ankohonana Masina izay ankalazaina asolo azy. Hatramin’ny nanafoanana ny Valo andron’ny Epifania (Oktavan’ny Epifania) tamin’ny fanavaozana natao tamin’ny 1960 dia andron’ny Valo andron’ny Epifania ny 13 Janoary, izay manondro ny daty famaranana ny fizaran-taona.
Araka ny fomba tranainy dia ny 2 Febroary no fifaranan’ny Noely, na fetin’ny Fanehoana ny Tompo (tany amin’ny tempoly), izay antsoina hoe koa fetin’ny Fanazavana. Io fety io dia itantarana ireo 40 andro fialan-tsasatr’i Maria talohan’ny hidiovany sy hitondrany ny zanany haseho any amin’ny tempolin’i Jerosalema. Tamin’ny Andro Antenantenany, ny andro alohan’ny Fanazavana (1 Febroary) dia nanamarika ny andro anesorana ny haingoan’ny Noely, isan’izany ny hazon’ny Noely sy ny fampisehonana ny tantaran’ny Fahaterahan’ny Mpamonjy. Ny fomba fanao izay manapitra ny Noely amin’ny fetin’ny Fanazavana dia nihamaty, afa-tsy ao amin’ny faritra miteny espaniola eto amin’izao tontolo izao izay mbola manome lanja ny Fetin’ny Fanazavana (espaniola: Fiesta de la Candelaria) sady fiafarana tsy ofisialin’ny fizaran-taon’ny Noely.
Ny fotsy no loko litorjika ampiasaina amin'ireo fotoana ireo.
Fotoana tsotra na Andron'ny FiangonanaHanova
Ny Fotoana tsotra na Andron’ny Fiangonana na Fotoan’ny Fiangonana, ho an’ny Fiangonana katolika romana sy ao amin’ny fiangonana protestanta sasany, dia ireo herinandro tsotra izay tsy isan’ny fizaran-taona manokana. Amin’ny teny latina dia atao hoe per annum ("mamakivaky ny taona") ireo fizaran-taona ireo.
Amin’ny fombam-pivavahana romana akehitriny izay nanomboka narahina taorian’ny Konsily Vatikana II dia ahitana Alahady miisa 33 na 34 sady voazara ho toko roa ny Fotoan’ny Fiangonana. Ny ampahany voalohany dia mivelatra manomboka amin’ny andro manaraka ny fetin’ny batemin’i Kristy ka mifarana amin’ny andro mialoha ny Alarobian'ny Lavenona (fiantombohan’ny Karemy). Misy Alahady telo hatramin’ny valo izy io arakaraka ny fanombohana na ny fifaranan’ny Paska.
Ny famakiana ny sorona masina (lamesa) dia miompana amin’ny asa fanompoan’i Kristy teto an-tany, fa tsy amin’ny zava-nitranga manokana loatra. Ny fanisana ny Alahady dia tohizana aorian’ny andron’ny Paska; misy Alahady roa anefa izay soloana ny Alahadin’ny Pentekosta sy ny Alahadin’ny Trinite, ary ny andro iray dia mety havela, arakaraka ny mampisy 52 na 53 herinandro ny taona.
Amin’ny fombam-pivavahana romana talohan’ny taona 1970, ny fotoana aorian’ny Epifania dia misy Alahady iray hatramin’ny enina. Sahala amin’ny endrik'ilay fombam-pivavahana ankehitriny, ny fizaran-taona dia mikasika indrindra ny toriteny sy ny asa nataon'i Kristy, maro ny fanoharana izay vakina avy ao amin'ny Evanjely. Ny fizaran-taona dia manomboka amin’ny 14 Janoary ary mifarana amin’ny Asabotsy mialoha ny Alahadin’ny Septoagesima ("fitopolo andro"). Ireo Alahady tsy isaina aorian’ny Epifania dia afindra ao amin’ny fotoana aorian’ny Pentekosta ary ankalazaina eo anelanelan’ny Alahady faha-23 sy ny Alahady farany aorian’ny Pentekosta araka ny filaharana tondroina ao amin’ny Codex Rubricarum N°18, izay tsy misy andro avela amin’ny taona. Talohan’ny fanavaozana natao tamin’ny tana 1960, ny Alahady avela dia tokony ho nankalazaina amin’ny Asabotsy mialoha ny Alahadin’ny Septoagesima, na, raha misy ny Alahady faha-23 aorian’ny Pentekosta, ny Asabotsy mialoha ny Alahady farany aorian’ny Pentekosta.
Loko litorjika: maitso.
Septoagesima / Fotoana mialoha ny Karemy
Ny Septoagesima (latina: Septuagesima "fahafitopolo") dia fari-potoana roa herinandro sy sasany alohan’ny Karemy. Io fizaran-taona alohan’ny Keremy io dia hita ao amin’ny fombam-pivavahana romana talohan’ny taona 1970 sy amin’ny tetiandro protestanta sasany. Fotoana tetezamita ao amin’ny ampahany voalohany manomboka amin’ny fizaran-taona per annum ("misava taona") hatramin’ny fizaran-taon’ny Karemy sady fiomanana amin’ny fifadian-kanina sy amin’ny fiaiken-keloka sy fibebahana izay manomboka amin’ny Alarobian’ny Lavenona. Na dia mitovy ny fanatanterahana ny ankamaroan’ny Opus Dei (na Officium Divinum) mandritra ny fizaran-taona per annum, dia misy fomba fanao sasany momba ny Karemy izay arahina, isan’izany ny fanafoanana ny Haleloia, ny fanoloana ny Haleloian’ny sorona masina (lamesa) amin’ny Tractus sy ny Gloria dia tsy atao intsony.
Tamin'ny fanavaozana ny fombam-pivavahana romana natao tamin’ny taona 1969 dia nofoanana io fizaran-taona io ary natambatra amin’ny Fotoana tsotra ireo herinandro ireo.
Ny loko litorjika ampiasaina dia ny volomparasy.
Ny Karemy sy ny PasionaHanova
Ny Karemy dia fari-potoana fieken-keloka sy fibebahana lehibe anomanana ny Paska. Manomboka amin’ny Alarobian'ny Lavenona izy ary, raha ampidirina ireo andro fieken-keloka sy fibebahana amin’ny Zoma masina sy ny Asabotsy masina, dia maharitra 40 andro, satria tsy isaina ny Alahady enin’ny fizaran-taona.
Amin’ny fombam-pivavahana romana, ny Gloria in Excelsis Deo ("Voninahitra any amin’ny Avo Indrindra") sy ny Te Deum ("midera anao izahay") dia tsy ampiasaina ao amin’ny lamesa sy ny litorjian’ny ora, afa-tsy amin’ny andro manetriketrika sy ny fety, ary ny famakiana ny Haleloia sy ny andalana mialoha izany amin’ny ankapobeny dia soloana fiderana hafa. Mampihatra ny tsy fampiasana azy ireo koa ny Fiangonana loterana.
Sahala amin’ny Advento, amin’ny endriky ny fombam-pivavahana talohan’ny taona 1970, ny diakra sy ny sodiakra dia tsy mitondra ny akanjo dalmatika mahazatra sy ny akanjobeny (izay tokony famantarana ny hafaliana) ao amin’ireo lamesan’ny fizaran-taona mandritra ny Karemy; raha tokony ho izany dia mitondra akanjobe misy foriporitra izy ireo, araka ny fanao taloha.
Amin’ny ny fombam-pivavahana romana talohan’ny taona 1970, ny herinandro roa mialoha ny Paska dia mamorona ny fizaran-taon’ny Pasiona ("fijaliana" "fiaretana"), izay zana-pizaràn-taona ao amin’ny Karemy izay manomboka amin’ny Litorjia marain’ny Alarobian’ny Lavenona ary mifarana alohan’ny lamesan’ny Harivan’ny Paska. Ao amin’io endriny izay atao hoe Alahadin’ny Pasiona io anaran'ny ny Alahady voalohan’ny fari-potoan’ny Pasiona, ary ny Alahadin'ny Sampan-kazo no anaran’ny Alahady faharoan’ny Pasiona. Ao amin’ireo lemesa Alahady sy "andro hafa" (nefa tsy amin’ny fety ankalazaina amin’ny voalohany amin’ireo herinandro roa ireo), ny Gloria Patri dia tsy atao ao amin’ny Antifonia Fidirana sy amin’ny Lavabo, toy izany koa amin’ny repons amin’ny Officium Divinum.
Ao amin’ny ny fombam-pivavahana romana taorian’ny taona 1969, ny hoe "Alahadin’ny Pasiona" sy "Alahadin’ny Sampan-kazo" dia samy anaran'ny Alahady mialoha ny Paska avokoa, atao hoe "Alahadin’ny Sampan-kazon’ny Fijalian'ny Tompo". Ny Alahadin’ny Pasiona taloha dia nanjary Alahady fahadimin’ny Karemy. Ny endriky ny fombam-pivavahana romana taloha dia amakiana ny fitantaràn’ny Matio amin’ny Alahady, ny an’i Lioka amin’ny Talata, nefa ny fombam-pivavahana romana taorian’ny 1969 dia amakiana ny Pasiona amin’ny Alahadin’ny Sampan-kazo (miaraka amin’ny Evanjely Sinoptika izay alahatra ao anaty tsingerina telo taona) ary amin'ny Zoma masina no amakiana ny Pasiona araka an’i Joany, sahala amin’ny fanao tao amin’ny fombam-pivavahana romana taloha.
Ny fampiasana ny voalin’ny lakroa sy ny sarin’ny olomasina mitafy volomparasy, izay fanao talohan’ny taona 1970, dia apetraka amin’ny fanapahan-kevitry ny fivorian’ny eveka isam-pirenena. Any Etazonia dia azo atao izany nefa tsy terena, fa manaraka ny sitrapon’ny pastora. Amin’ny fombam-pivavahana romana rehetra, ny vakiteny dia mifandray amin’ny zava-nitranga mahakasika ny Sakafo Farany, ny famadihan’i Jodasy, ny Fikaliana (Pasiona) ary ny fahafatesan’i Kristy.
Ny herinandro mialoha ny Paska dia atao hoe Herinandro masina (na Herinandro mangina).
Ao amin’ny fiombam-pivavahana romana, ny fety izay tafalatsaka amin’io herinandro io dia tsy tanterahina, afa-tsy raha manana filaharana manetriketrika izany fety izany, ka afindra amin’ny daty hafa. Ny fety manetriketrika voasoratra ao amin’ny tetiandro ankapobeny azo ampidirina ao amin’io herinandro io dia ny fetin’i Md Josefa sy ny Filazana mialoha ny fitorontoronana an’i Jesoa tamin’i Maria ihany.
Ny loko litorjika ampiasaina dia ny volomparasy. Ny loko mavokely dia azo ampiasaina amin'ny Alahady fahefatry ny Karemy (Alahadin’ny fifaliana), raha izany no mitranga. Amin'ny Alahadin’ny Sampan-kazo, hatramin’ny taona 1970, dia ny mena na ny volomparasy no loko ampiasaina, ny mena dia nampiasaina taorian’ny taona 1955 amin'ny famakiana ny tsodranon’ny Salamo.
Telo andron'ny Paska
Ny Telo andron'ny Paska (latina: Triduum paschale) dia ny Zoma masina sy ny Asabotsy masina ary ny Alahadin’ny Paska. Araka ny fomba litorjika dia tsy manomboka amin’ny maraina fa ny harivan’ny andro mialoha azy ny andro tsirairay.
Ny Triduum dia manomboka amin’ny takariva alohan’ny Zoma masina amin’ny alalan’ny lamesan’ny Sakafo farany (Fanasan’ny Tompo), izay ankalazaina miaraka amin’ny fitafiana fotsy sady ahitana matetika fombam-pivavahana (ritoaly) anasana tongotra amin’ny fotoam-pivavahana. Fomba mahazatra amin’io hariva io ny manao alim-bavaka manokana (isan-tokantrano na isam-bondrona) izay manomboka aorian’ny fanompoam-pivavahana hariva sady mitohy hatramin’ny misasak’alina. Izany alim-bavaka izany dia averina indray amin’ny mazava atsinanana ary mitohy hatramin’ny fanatanterahana ny litorjian’ny Zoma masina.
Mandritra ny Zoma masina dia tsy mankalaza lamesa ny Fiangonana katolika. Ny fankalazana ny Fijaian'ny Tompo dia tanterahina amin’ny tolakandro na amin’ny hariva. Mizara telo izany: litorjian’ny Teny izay misy famakiana ny Pasiona araka an’i Joany ka mifarana amin’ny Vavaka manetriketrika ho an’ny rehetra. Ny fiangonana hafa sasany dia manokana koa ny Zoma masina ho fahatsiarovana ny Pasiona.
Ny lokon’ny fitafiana dia miovaova: tsy misy loko, ny mena na ny mainty dia tsy ampiasaina ao amin’ny fomba tranain’ny fiangonana samihafa. Azo esorina ny loko marevaka. Ny fiangonana loterana dia manaisotra matetika ny fanaingoana marevaka sy ireo sarimasina na manisy voaly miloko matroka azy ireo. Atao tsotra miaraka amin’ny hira na mozika malahelohelo ny fanompoam-pivavahana izay mifarana amin’ny firavan’ny fiagonana am-pahanginana. Ao aminn’ny fombam-pivavahana katolika sy loterana sasany ary anglikana "ambony" dia esorina ampahibemaso ny lamba manarona ny lakroa (lakroa tsy voatery ho ilay mipetaka eo amin’ny alitara/ôtely na eo akaikin’io). Alana sarona tsy misy fombafomba manokana ny lakroa hafa aorian’ny fanompoam-pivavahana.
Ny Asabotsy masina dia ahatsiarovana ny andro nialan’i Jesoa sasatra tao am-pasana. Ao amin’ny Fiangonana katolika romana dia tsy misy lamesa amin’io andro io; ny lamesa amin’ny Alim-bavaky ny Paska, izay tokony hankalazaina amin’ny misasakalina aza, dia matetika ankalazaina amin’ny hariva amin'ny lamesan’ny Paska. Raha tsy misy ny fankalazana araka ny litorjia dia tsy misy ny loko litorjika.
Ny Alim-bavaky ny Paska dia atao amin’ny alin’ny Asabotsy masina hatramin’y Alahadin’ny Paska mba hankalazana ny Fitsanganan-ko velon’i Jesoa. Ny loko litorjika dia fotsy, matetika ampiarahina amin’ny lokom-bolamena. Ao amin’ny fombam-pivavahana romana, amin’ny fotoan’ny Gloria in Excelsis Deo, ny orga sy ny lakolosy dia sambany ampiasaina amin’ny litorjia hatramin’ny roa andro, ary ny sarimasina, misaron-damba nandritra ny Pasiona (na navadika), dia alana sarona. Ao amin’ny fiangonana loterana, ny loko sy ny sary masina dia apetaka amin’ny toerany indray.
Fankalazana ny fitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty ny Paska na Paka. Miovaova arakaraka ny taona sy arakaraka ny firafitry ny daty ao amin’ny tetiandro manara-bolana ny datin’ny Paska. Ao amin’ny fombam-pivavahana romana dia manomboka amin’ny alim-bavaky ny Paska haramin’ny Alahadin’ny Pentekosta ny fari-potoan’ny Paska. Tamin’ny endrik’io fombam-pivavahana io tamin’ny taona 1970 dia nisy ny atao hoe Oktavan’ny Pentekosta ("valo andron'ny Pentekosta"), ary ny fotoan’ny Paska dia naharitra hatramin’ny ora fahasivin'ny Asabotsy (latina: Nona "fahasivy") manaraka.
Ao amin’ny fombam-pivavahana romana, ny Oktavan’ny Paska dia tsy ahafahana mankalaza fety na fahatsiarovana hafa; ny fety manetriketrika, sahala amin’ny Andron'i Maria, izay tafalatsaka ao anatiny dia ahemotra amin’ny Alatsinainy manaraka. Raha milatsaka amin’ny 25 Avrily ny Alahady na ny Alatsinainin’ny Paska dia afindra amin’ny Talata manaraka ny Litania Lehibe, izay fanao ao amin’ny fombam-pivavahana romana talohan’ny taona 1970.
Araka ny didy tamin’ny 5 Mey 2000, ny Alahady faharoan’ny Paska (Alahady manaraka ny andron’ny Paska) dia atao hoe koa Fetin’ny Famindrampon’Andriamanitra tao amin’ny fombam-pivavahana romana.
Ny Alakamisin’ny Andro niakarana, izay ankalazana ny fiverenan’i Jesoa any an-danitra taorian’ny fitsanganany tamin’ny maty, dia ny andro fahefapolon’ny Paska, nefa amin’ny toerana izay tsy mitandrina izany ho "Andro masina tsy maintsy tandremana" dia afindra amin’ny Alahady manaraka, araka ny fombam-pivavahana romana taorian’ny taona 1960.
Ny Pentekosta na PentekôtyHanova
Ny Pentekosta dia andro fahadimampolo sady farany ao amin’ny fari-potoan’ny Paska. Ankalazana ny fidinan'ny Fanahy Masina tamin’ireo Apostoly izy, ka manamarika ny fahaterahan’ny Fiangonana sy ny andron’ny Apostoly.
Ny loko litorjika ampiasaina dia ny fotsy, nefa ovana mena izany amin’ny andron’ny Pentekosta.
Fotoana tsotra, fotoana aorian’ny Pentekosta, fotoana aorian’ny Trinite na fotoan’ny FanjakanaHanova
Io fizaran-taona io, izay tondroina amin’ny anarana maro samihafa, dia manaraka ny fari-potoan’ny Paska sy ny fetin’ny Paska sy ny an’ny Fiakarana ary ny an’ny Pentekosta. Ao amin’ny fombam-pivavahana romana taorian’ny taona 1969 dia manomboka indray amin’ny Alatsinainin’ny Pentekosta ny fotoana tsotra, ka dinganina ny Alahady izay tokony ho tanatin’ny Pentekosta. Ao amin’ny fombam-pivavahana romana taloha, izay ankalazana ny Pentekosta miaraka amin’ny Oktava (andro fahavalo) dia manomboka amin’ny Vesperan’ny Asabotsy manaraka ny Pentekosta ny fotoana aorian’ny Pentekosta. Ireo Alahady ireo dia mandray indray ny filaharany ka ny Alahady mialoha dia Advento amin’ny andro faha-34, raha dinganina ireo herinandro tsy misy toera-malalaka (fombam-pivavahana romana ankehitriny) na izay alahatra ho "Alahady manaraka ny Pentekosta" (fombam-pivavahana talohan’ny taona 1970, Ortodoksia atsinanana sy Fiangonana protestanta sasany) na ho "Alahady manaraka ny Trinite" (ho an’ny Fiangonana protestanta sasany). Io fizaran-taona io dia mifarana amin’ny Asabotsy alohan’ny Alahady voalohan’ny Advento.
Ireo avy ireo fety ao amin'io ny fizaran-taona io:
ny Alahadin’ny Trinite, Alahady aorian’ny Pentekosta;
ny Corpus Christi ("Vatan’i Kristy") (fombam-pivavahana romana sy anglikana ary loterana), ny Alakamisy ao amin’ny herinandro faharoa aorian’ny Pentekosta, matetika ankalazaina amin’ny Alahady manaraka;
ny Fety manetriketriky ny Fo Masin’i Jesosy (fombam-pivavahana romana), Zoma ao amin’ny herinandro fahatelo aorian’ny Pentekosta;
ny Andro Iraisam-pirenena ho an’ny Mahantra, Alahady faha-33 amin’ny fotoana tsotra;
ny Fetin’ny Kristy Mpanjaka, Alahady farany alohan’ny Advento (fombam-pivavahana romana, loterana, anglikana) na Alahady farany amin’ny volana Oktobra (endriky ny fombam-pivavahana romana tamin'ny taona 1925-1969).
Mandritra ireo herinandro farany amin’ny fotoana tsotra ireo dia maro ny fiangonana misintona ny eritreritry ny mpiangona amin’ny fiavian’ny Fanjakan’Andriamanitra, ka izany dia mamarana ny taom-piangonana amin’ny lohahevitra eskatolojika izay isan’ny lohahevi-dehibe mandritra ny fizaran-taon’ny Advento izay anombohan’ny taona litorjika. Ohatra, amin’ny fombam-pivavahana romana talohan’ny taona 1970 dia ny Evanjelin'i Matio 24.15-35 no vakina, ary ao amin’io fombam-pivavahana io amin’izao fotoana izao, ireo Alahady telo farany dia amelabelarana lohahevitra mitovy amin’io koa.
Ny fombam-pivavahana romana dia tsy manome anarana manokana io ampahany farany amin’ny fotoana tsotra io, ny fiangonana sasany dia manome anarana azy sady mety manova ny loko litorjika. Mampiasa ny fitenenana hoe "Alahady mialoha ny Advento" ny Fiangonan’i Angletera mba hilazany ireo Alahady efatra farany sady mampiasa fitafiana mena. Ny fiangonana hafa, toy ny Fiangonana metodista miray sy ny Fiangonana kristiana-Sinodan’i Masindahy Timote, dia mampiasa ny teny hoe Kingdomtide ("Fizaran-taon'ny Fanjakana"). Ny Lutheran Church of Missouri Synod (LCMS) dia mampiasa ny teny hoe Third-Last, Second-Last, Last Sunday in the Church Year ("Alahady fahatelo farany sy faharoa farany ary farany amin’ny taom-piangonana") sady tsy manova ny loko maitso. Tsy mankalaza amin’ny fomba ofisialy ny "Fetin’ny Kristy Mpanjaka" ny LCMS. Ny Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS) dia mampiasa ny teny hoe Period of End Times ("Fotoam-pifaranana") sady mampiasa fitafiana mena amin’ny Alahady voalohany sy faharoa.
↑ "Calendrier" in Microsoft Encarta 2009. 1993-2008 Microsoft Corporation.
↑ Stern, Sacha (2001). Calendar and Community: A History of the Jewish Calendar. Oxford University Press. pp. 2–3. ISBN 0-19-827034-8.
↑ "Dia hoy Mosesy tamin'ny olona: Tsarovy izao andro izao, izay nivoahanareo avy tany Egypta, tamin'ny trano nahandevozana, fa tamin'ny tanana mahery no nitondran'i Jehovah anareo nivoaka avy tany; koa aza misy mihinana izay misy masirasira. Izao andro amin'ny volana Abiba izao no ivoahanareo." (Eksodosy 13.3-4).
↑ Gesenius's Lexicon
↑ Tamin'ny volana voalohany (volana Nisana izany) tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo nanjakan'i Ahasoerosy mpanjaka, nisy nanao pora (filokana izany) teo anatrehan'i Hamana ny amin'ny isan'andro isan'andro sy ny isam-bolana isam-bolana hatramin'ny volana faharoa ambin'ny folo (volana Adara izany) (Estera 3.7).
↑ Months of the Jewish Calendar
↑ Talley, Thomas J. (1991). The Origins of the Liturgical Year. Pueblo Publishing Company. pp. 82–83. ISBN 978-0-8146-6075-1.
↑ Michel Rouche, Les origines du christianisme 30-451, Hachette, p. 48
↑ 9,0 et 9,1 Michel Rouche, Les origines du christianisme 30-451, Hachette, p. 149
↑ Macaire de Simonos-Pétra, Mystagogie du Grand Carême. Essai de théologie du temps liturgique., Apostolia, Paris, 2018
↑ Pathikulangara, Varghese. Mar Toma Margam, (A New Catechism for the St. Thomas Christians of India), Kottayam: Denha Services, 2004
↑ 12,0 et 12,1 Hickman, Hoyt L. (October 1, 2010). The New Handbook of the Christian Year: Based on the Revised Common Lectionary. Abingdon Press. p. 31. ISBN 9781426730740.
↑ Fisher, Jeanne (2015). "The Liturgical Year" (PDF). Third Presbyterian Church. Presbyterian Church (U.S.A.). Retrieved September 29, 2015. The Revised Common Lectionary, used by Presbyterians, Methodists, Episcopalians, Lutherans and some Baptists, is arranged in a three-year cycle.
↑ 14,0 14,1 et 14,2 Barry, One Faith, One Lord (2001), p. 116
↑ Pope Benedict XVI, Summorum Pontificum
↑ The Annotated Book of Common Prayer p. 242
↑ Sparrow, Anthony and John Henry Cardinal Newman. A Rationale upon the Book of Common Prayer of the Church of England, Oxford, UK
↑ Gregg Strawbridge, "Why the Church Calendar Is Important"
↑ General Norms for the Liturgical Year and the Calendar, 39
↑ "The Color Blue in Advent", United Methodist Church
↑ "Liturgical Colors", The Episcopal Church
↑ "What is the meaning and use of liturgical colors?", Evangelical Lutheran Church in America
↑ 24,0 et 24,1 Code of Rubrics included in the 1962 Roman Missal, 72 (PDF)
↑ 1960 Code of Rubrics incorporated in the 1962 Roman Missal, 77 (PDF)
↑ 1960 Code of Rubrics, 18.
↑ Missale Romanum, 1939, Dominica II post Epiphaniam
↑ Missale Romanum, 1939, Dominica XXIII post Pentecosten
↑ Code of Rubrics, 77
↑ Code of Rubrics, 74
↑ Missale Romanum, 1920 typical edition, p. 156
↑ Missale Romanum 1962, p. 118
↑ Missale Romanum 1962, p. 130
↑ Code of Rubrics, 428
↑ Ritus servandus in celebratione Missae, VII, 6, in Missale Romanum 1962, p. LIX; cf. Missale Romanum 1962, p. 118
↑ Holy Thursday Evening Mass of the Lord's Supper, 44
↑ 1960 Code of Rubrics, 80
↑ Our Sunday Visitor: Feast of the Divine Mercy
↑ General Norms for the Liturgical Year and the Calendar, 7 and 25
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetiandro_litorjika_kristiana&oldid=978695"
Dernière modification le 25 Desambra 2019, à 03:25
Voaova farany tamin'ny 25 Desambra 2019 amin'ny 03:25 ity pejy ity.